Ingabe i-Spotify idla malini? | Izindaba zamagajethi
Ingabe i-Spotify idla malini?
Spotify iyinkundla esakazwa kakhulu yomculo eku-inthanethi emakethe, iyindlela ephumelela kunazo zonke futhi ethandwayo yokulalela umculo ngokungenamkhawulo, kuya ngokuthi siyayisebenzisa yini inguqulo yePrimiyamu noma inguqulo yamahhala, njengoba sazi ukuthi uhlobo lwamahhala lunayo ukulinganiselwa okuthile, njengesibopho sokulalela izikhangiso ezithile.
Kodwa-ke, ukungabaza kuhlala kuphakama mayelana nokuthi i-Spotify idla malini kudivayisi yethu ezingeni ledatha yeselula, futhi ukuthi amanani ethu wedatha angaba yikhanda langempela ngaphansi kwaziphi izimo. Sichaza ukuthi idatha engakanani i-Spotify oyisebenzisayo kusuka esilinganisweni sakho ukuze wazi ukuphatha uma ulalele umculo owuthandayo, hlala nathi.
Kubalulekile ukuthi sazi ukuthi ukulalela umculo ku-Spotify sidinga idatha yeselula noma i-intanethi, noma ngabe isiphi isici, futhi kusobala ukuthi, lapho sisebenzisa inethiwekhi ye-WiFi, iSpotify ibeka phambili lokhu ukulanda umculo esiwulalelayo ngokusebenzisa le ndlela futhi Ngakho-ke, asimoshi idatha yethu yeselula ngendlela engenzi lutho, lokhu kuyinto iningi lezicelo zeselula ezivame ukuyenza, noma ngabe iyi-Android noma i-iOS, kepha lokhu, ngaphandle kokungabaza, akuxazululi okubalulekile umbuzo, Isebenzisa malini idatha yesilinganiso sami?
1 Ikhwalithi yomculo njengesinqumo esihle
2 Ngakho-ke i-Spotify idla malini ngempela?
3 Ungonga kanjani ekusetshenzisweni kwedatha kweSpotify
Ikhwalithi yomculo njengesinqumo esihle
Into ebaluleke kakhulu lapho kunqunywa ukuthi sizodla idatha yeselula engakanani ngenkathi silalele umculo kuSpotify yikhwalithi yomculo, futhi asibhekiseli ekutheni ulalela iReggaeton noma iRock & Roll kepha yiqiniso lesinqumo ezingeni lomsindo obala umculo esiwulalelayo. Njengakwividiyo, esikubona ku-YouTube ngokwesibonelo kusuka ku-420p kuya ku-4K, umsindo futhi unezinqumo ezahlukahlukene ezisivumela ukuthi sinyuse noma sinciphise ikhwalithi yomsindo esiwulalelayo, futhi kusobala ukuthi umsindo osezingeni elingcono uzodinga ukusetshenziswa kwedatha ephakeme.
Ikhwalithi ejwayelekile: Le yikhwalithi ejwayelekile yeSpotify, edinga ukusetshenziswa kwedatha okuncane futhi okuzonikela ngokuzenzakalelayo ngekhwalithi yomsindo omncane. Isebenza ngokulanda cishe i-96 Kbps futhi ngaphandle kokungabaza ukukhetha okubi kakhulu. Le yikhwalithi evame kakhulu i-Spotify esebenza ngayo lapho sisebenzisa idatha yeselula ukulalela umculo wethu.
Ikhwalithi ephezulu: Le ikhwalithi yesibili ye-Spotify, ngenxa yayo singasebenza ngokulanda cishe kuma-160 Kbps, sinikeze ikhwalithi yomsindo ophakathi, esizosivumela ukuthi sijabulele ngokusebenza okuncane futhi sijabulele umculo ngaphandle kwezinkinga eziningi kakhulu. Le mfanelo ayikhethwa ngokuzenzakalela, kepha kufanele sizikhethele yona.
Ikhwalithi Ephezulu: Le yikhwalithi engcono kakhulu enikezwa yiSpotify kwinsizakalo yayo yokusakaza, ikude kakhulu nekhwalithi ejwayelekile, empeleni iyaphindeka kathathu futhi iyedlula ngoba isebenza ngokulanda cishe u-302 Kbps, yize kusekude kakhulu ne- I-HiFi, isivele iqala ukunikeza ukusebenza okungaphezu kokumukelekile ukuze ithole ukusebenza okuhle kuma-headphone ethu noma okokulalelwayo.
Kodwa-ke, ngokuzenzakalela zonke izinhlelo zokusebenza ze-Spotify (ngaphandle kwezinguqulo ezithile zohlelo lokusebenza lwedeskithophu) zivunyelwe. Ikhwalithi ezenzakalelayo, uhlelo lokusebenza luzonquma ngokwalo ukusebenza kwesilinganiso sedatha yethu futhi ngaleyo ndlela kusindise okuphezulu okusemandleni alokhu ngenkathi silalela umculo, futhi kuvumelana nezidingo zokusabalala kwamaselula ngakho-ke sigwema ukuphazanyiswa komculo.
Ngakho-ke i-Spotify idla malini ngempela?
Njengoba sishilo, ukusetshenziswa kuhambelana ngqo nekhwalithi yomsindo esiwulalelayo, okungukuthi, ngcono ikhwalithi yomsindo esiwukhethile kuhlelo ngohlelo lwayo lokumisa, ukusetshenziswa kwedatha kuzoba kukhulu. omakhalekhukhwini, ukusinikeza umbono omncane, lokhu kuzoba ukusetshenziswa ngokuya ngenqubo ekhethiwe:
En Ikhwalithi ejwayelekilel sizodla cishe i-40 MB yesilinganiso sedatha yethu ngehora ngalinye lomculo esililalele.
En Ikhwalithi ephezulu sizodla cishe i-70 MB yesilinganiso sedatha yethu ngehora ngalinye lomculo esililalele.
En Ikhwalithi Ephezulu sizosebenzisa cishe i-150 MB yesilinganiso sedatha yethu njalo ngehora lomculo esililalele
Ukuthola umbono, ngezinga leselula elingu-4 GB isiyonke sizokwazi ukulalela cishe amahora ayikhulu omculo ngekhwalithi ejwayelekile, cishe amahora angama-100 omculo osezingeni eliphakeme noma amahora angama-56 kuphela omculo osezingeni eliphakeme. Uma unesilinganiso esizobe siseduze kwalawa makhono, usungakwazi ukwenza umthamo oqondile ukuze ukwazi ukwenza izibalo zakho futhi ungaphelelwa yidatha yeselula ukumane ulalele umculo ngenkathi uya emsebenzini.
Ungonga kanjani ekusetshenzisweni kwedatha kweSpotify
Lona ngumsebenzi onzima impela, futhi sizokwazi ukuchaza ukuthi siyisebenzisa kanjani idatha yethu kodwa ngeke sikwazi ukonga kakhulu uma sisebenzisa kakhulu iSpotify. Kodwa-ke, sizokushiyela ezinye izindlela ukuze uthole okuningi ku-Spotify:
Spotify Premium Ikuvumela ukuthi ulande umculo futhi uwulalele ungaxhunyiwe ku-inthanethi: Le inketho ehlakaniphe kakhulu uma uqaphele ukuthi uchitha isilinganiso sakho sedatha ngeSpotify. Khumbula ukuthi ungahlala ukhetha uhlelo lomndeni olukuvumela ukuthi wabelane ngeSpotify nabanye abasebenzisi abane, noma usebenzise ngokunenzuzo inani labafundi beSpotify lama-euro angu-4,99 ngenyanga.
Sebenzisa inketho "Okuzenzakalelayo" kwikhwalithi yomculo: Ngale ndlela i-Spotify izolungisa isilinganiso sedatha ukuzama ukulawula ukusetshenziswa ngangokunokwenzeka, inikeze umculo ngekhwalithi ephansi ngedatha, nangekhwalithi engcono kakhulu nge-WiFi.
Nokho, I-Spotify izama "ukugcina" umculo esivele siwulalele ukuze ungalandi umculo njalo futhi ugcine imali ngangokunokwenzeka. Ngakolunye uhlangothi, uma uya esigabeni se- izilungiselelo zesistimu kohlelo lwakho lokusebenza ungalawula ukusetshenziswa kwedatha kwezinhlelo zokusebenza ezinjengeSpotify bese wenza isilinganiso.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ingabe i-Spotify idla malini?
Sihlaziya ama-headphone we-SPC Heron, imbangi yama-AirPods?